गृहपृष्ठ » शिक्षा » एसईईमा ३० बर्ष अन्तरका बाबु पास-छोरा फेल : आफ्नो सफलतामा खुशी हुने कि छोराको असफलतामा दुखी ?
काठमाडौं । भन्छन्, छोरा जत्ति नै महान भए पनि बुबा बराबर हुन सक्दैन् ।
हरेक बुवाको चाहना हुन्छ, छोराले राम्रो पढोस्, हरेक कक्षामा राम्रो अंक आओस् ।
यसबीच छोरा अनुत्तीर्ण (फेल) भयो भने बाबु दुखी हुनु स्वभाविक हो । त
र, बाबु छोराले सँगै परीक्षा दिएर बाबु उर्तीण (पास) हुँदा छोरा अनुत्तीर्ण बाबुको मनस्थिति कस्तो होला ? आफ्नो सफलतामा खुशी हुने कि छोराको असफलतामा दुखी ?
बुबा पास, छोरा फेल
सोचिरहनुभएको होला, कतै पनि कहीँ हुन्छ ? तपाईंले ठिक सोच्नुभयो, सामान्यतया यस्तै दुनियाँमा हुँदैन् । तर भारतमा यस्तो एक रोचक घटना भएको छ ।
भारत, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्डले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको १० औं कक्षा (एसईई) को नतिजामा यस्तो देखिएको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यका अनुसार ४३ वर्षीय भास्कर वाघमारे र उनका छोरा, जो पुणेबाट आएका थिए, उनीहरुले यस वर्ष महाराष्ट्र बोर्डको १० औं कक्षाको परीक्षा दिए । यो परीक्षामा उनी आफै उत्तीर्ण भए पनि छोरा फेल भएका हुन् ।
बाल्यकालमा पढाइ छुट्यो
सानै उमेरमा परिवारको जिम्मेवारी काँधमा आएका कारण भास्कर ७ कक्षामा नै पढाइ छाड्न बाध्य भएका थिए । त्यसपछि उनले काम गर्न थाले । वाघमारे सधैं पढ्न चाहन्थे, तर बाध्यताले हात बाँधिदिएको थियो ।
यति हुँदाहुँदै पनि उनको पढाइप्रतिको लगाव समाप्त भएन । सोही कारण उनले पढाइ छाडेको ३० वर्षपछि पुनः छोरासँगै १० कक्षाको परीक्षा दिनुभयो ।
पुणे शहरको बाबासाहेब अम्बेडकर क्षेत्रमा बस्ने वाघमारे निजी कम्पनीमा जागिर गर्छन् । आफ्नो सफलताका बारेमा उनले भने, ‘म सधैं थप अध्ययन गर्न चाहन्थे तर पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण अघि बढ्न सकिन् ।’
बाबु छोराले सँगै परीक्षा दिए
उनले थप भने, ‘समय बित्दै जाँदा मैले फेरि पाठ्यक्रम सुरु गर्ने सोच बनाए, यसमा म निकै उत्सुकता थिए ।’
धेरै कमाउनका लागि धेरै पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा उनको दिमागमा आयो । त्यसैले उनले कक्षा १० को परीक्षा दिने निर्णय गरेँ । संयोगवश, उनका छोरा पनि सोही वर्ष एउटै कक्षाको परीक्षामा सहभागी थिए । छोराका कारण पनि बाबुलाई धेरै मद्दत मिल्यो । दैनिक अध्ययन गर्ने र कामपछि परीक्षाको तयारीमा व्यस्त हुने गरेको वाघमारे बताउँछन् ।
परीक्षामा पास भएपछि उनलाई अहिले आफ्नो मेहनतको फल पाएको महसुस हुन्छ । अहिले उनी खुसी छन् । तर साथमा छोरा दुई विषयमा फेल भएकोमा दुःखी पनि छन् । यस सम्बन्धमा वाघमारे भन्छन्, ‘छोरालाई पूरक पूर्ण परीक्षामा सहयोग गर्छु । म पक्का छु कि उसले यी परीक्षाहरू पास गर्नेछ ।’